Guddiyada Dabaysha ee Ku Xidhan Buundada Yavuz Sultan Selim | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDabaylaha oo ku xiran Yavuz Sultan Selim Bridge
07 / 05 / 2016 34 Istanbul, tareenka, GUUD, hyperlinks, TURKEY
La xiriir Yavuz si toos ah
Digniinta dabeysha ayaa ku xirneyd Buundada Yavuz Sultan Selim: Dhismaha dariiqa dabeysha ayaa laga bilaabay buundada Yavuz Sultan Selim, oo si xawli ah u socota. Guddiyada dabayshu waxay saameyn ku yeelan doontaa dabaysha baabuurta maraya buundada dhexdeeda.
Dhismaha saldhigyada dabayshu waxay ka bilaabantay Yavuz Sultan Selim Bridge, oo dhismayaal ah. Gawaarida iyo gawaarida ka gudbaya buundada ayaan saameyn ku yeelan doonin dabaysha. Ka dib markii ay soo ifbaxeen jasiiradaha Aasiya iyo Yurubta ee Bosphorus Bridge, markale ayaa sii wadi doona shaqada. Meelaha loo yaqaan "Yavuz Sultan Selim Bridge", waxaa la dhisay shoolad hufan oo hufan. Dhererka sare wuxuu noqon doonaa mitirka 3, kaas oo noqon doona cabbir muhiim ah ee ammaanka gaadiidka. Nidaamka dabaysha ayaa si gaar ah loogu talagalay si loo hubiyo in buundooyinka aan la gaari karin culays dabayl ka dib markii buundada la furo si loo hawlgalo. Qeybaha dabaysha waxaa lagu dhajin doonaa qaybo ka mid ah xeebaha buundada iyo qaybaha xeebta ee wadada. Waxay noqon doontaa mitirka 3 oo ka sarreeya heerka qiiqa birta ah halkaasoo baabuurta la dhaafi doono. Shidaalka dabka waxay ku yaalliin meelo xeebeed oo ka mid ah dusha godadka
Alsancak Station Traffic
Daacad kale oo ka jirta tareenka miyiga ah ee Bursa